Akụkọ - Youxing Shark's New Year Message | Nke a bụ mmalite nke olileanya. Mee 2018 bụrụ njem bara uru!
Taa, ka anyị nyekwa oge ọzọ mmetụta nke ịdị ebube. Nke a bụ oge mbụ Youxing Shark na ị zutere na afọ ọhụrụ a. Abalị na-aga ịla, ma anyanwụ na-ada nwayọ mgbe chi bọrọ. Site na nnukwu ntu oyi na oke ọhịa snow, ebe ọ bụla juputara nkụ, osikapa, mmanụ, nnu na anwụrụ ọkụ, site na ndị na-ehi ụra mmiri dị na ndịda nke Osimiri Yangtze ruo na ice oyi na windo windo grilles na ugwu. Nke a bụ ochie Abalị ikpeazụ nke afọ, nke a bụ anwụ mbụ nke afọ ọhụrụ. Ka ọ susuo gị ọnụ, makụọ gị, kpoo gị ọkụ, ma soro gị gaa njem na aha ịhụnanya!
Taa, anyị agaghị enyocha data oyi, nyochaa obi ọjọọ nke ọnọdụ akụ na ụba, lelee ndị asọmpi anyị, ma kwụsị ịtụ ụjọ ma na-eje ije na ice dị mkpa. Taa, shark na-achọ ime ka obi gị dị ọkụ, na-eche maka nrọ gị, na-eguzo na mmalite nke olileanya, ma sonyere gị ịnabata njem ọhụrụ nke 2018!
Taa, na ihu nke Afọ Ọhụrụ, anyị na-eleghachi anya azụ ma na-eche echiche dị ọkụ. Na afọ 2017 gara aga, ị nwere ike ịlaghachi azụ, mana nrọ gị ga-ebili dị ka anyanwụ; o nwere ike ịbụ na ị gbanyela otu ọkụ, ekwere m na olile anya ga-adị ka ọnwa na-enwu gbaa.
A mụrụ anyị n’oge kacha mma, anyị nọ n’oge okwukwe, anyị na-anabata mmiri ọzọ olile anya n’oge dị mma!
N'agbanyeghị ụdị mmalite ị na-achọ iweta, ekwenyere m na ọsụsọ na-edozi ahụ karịa anya mmiri. Ga-amaja agụụ, amaja ibi ndụ, amaja ịlụ ọgụ, amaja ịgbanwe! Kwesiri ịrapara na onwe gị, rapara n'eziokwu, rapara na obiọma!
Nke a bụ mmalite nke olileanya. Nrọ abụghị ebe dị anya. Ọ dabeere na anyị na-achụ nke a mma ndụ na New Year, rube isi na ibu ọrụ na àgwà, na-aga n'ihu kasị nke ọrụ na nkà na ụzụ.
N’afọ ọhụrụ, shark ga-eso gị guzo, dịka oke mmiri mmiri na - agwakọta na mmiri ọzọ, dịka oke ọkụ nke ọkụ ọzọ gbara gburugburu. Anyị maara na ọ bụ naanị site n'ime onwe anyị ka anyị nwere ike nwee ọdịnihu mara mma maka ndị mmadụ n'otu n'otu; naanị site na ijikọta ọnụ anyị nwere ike ịnabata ọdịnihu mara mma.
Kwere ya! Mee ka nrọ gị jiri obi ike fee! Ihe niile kwesịrị ịmalite site na gị ma bụrụ nke gị. Ejiri ndụ gị, nkwenkwe gị, akụkọ ihe mere eme gị, nzube gị.
Ezigbo Youxing Shark akụrụngwa suppliers, emeri na mmekọ, isi ọnụ ahịa, nkesa, ọ bụla na-arụ, ọ bụla enyi, M na-atụ ị ga-echere obi ụtọ na ịnabata ịhụnanya na afọ ọhụrụ. Tinyere ikuku, nke anwụ na-eme ka ụlọ ọrụ, na-eche ihu n'oké osimiri, okooko osisi mmiri na-eto.
Post oge: Ọgọstụ-11-2020